Uchungechunge lwe-1270 Dragon® Dredge - i-Ellicott Dredges
Le cutterhead dredge eguquguqukayo inikela ngamanani amahle kakhulu wokukhiqiza wokujula kokujula kuze kufike kuma-50 '(15 m). Ngosayizi womzimba olinganiselayo nokugcizelelwa kuzilawuli ezilula, eziqondile, ukuqeqeshwa kulula.
I-1270 Dragon® dredge i-dredge esezingeni eliphakathi nendawo ejwayele ukusetshenziselwa amachweba, amatheku, imifula, namaphrojekthi wokwehliswa komgwaqo ngaphakathi, kanye nokubuyiselwa kolwandle, ukubuyiselwa komhlaba, ukwakhiwa kweziqhingi nokulawulwa kwezikhukhula.
I-1270 DREDGE ADVANTAGES
Umklamo ohlangene uvumela ukuthunyelwa okusheshayo nokugqugquzela. Kulula ngokwanele ukudonsa nokuhamba ezindaweni ezivalekile.
Ifakwe izinjini ezimbili ezihlukene zikadizili, enye yazo inikezelwe kupompo yedredge yokukhiqiza kahle.
Ukukhiqizwa kweDredge ezindaweni ezinomkhawulo wokwehliswa kungakhuphuka kakhulu ngesici sokuzithwala se-spud.
Usayizi wokukhipha: I-18 ″ x 18 ″ (450 mm x 450 mm)
Isibungu Esikhulu Sezinjini C 32 : I-800 HP (597 kW)
Isibungu Esisizayo Sezinjini C 9 : 375 HP (280 kW)
Amandla @ Isinqe seDrayivu: 155 HP (116 kW)